नेपालका यी ४६ जिल्लामा फैलियो कोरोना, कहाँ कति ? — Sanchar Kendra
१भिजाएको चना खानुहोस्, स्वास्थ्यलाई हुनेछन् यस्ता फाइदा
२यस्ता छन् जाडोमा गहतको झोल खाँदा हुने चामत्कारिक फाइदा
३यस्ता छन् रायोको साग खानुका ६ फाईदा, कुन-कुन रोगबाट बचाउँछ ?
४पौडेल गिरफ्तार परेकै ठाँउमा पुगेर कांग्रेस नेताहरूले भने- स्थानीय प्रशासन र प्रहरी कठपुतली बने
५थप १३४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
६कोरोना संक्रमणबाट थप १५ जनाको मृत्यु
७नेपालसंगको सम्बन्धबारे भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले गरे यस्तो खुलासा, काठमाडाैंदेखि नयाँदिल्लीसम्म खैलाबैला
८आज फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
९रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘पुलिसको डण्डाले पेलिएका मेरा करङ हिजोभन्दा आज बढी दुख्दैछ’
१०काठमाडौँमा घट्यो अर्को डरलाग्दो घटना, यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो आमाछोरीको शव, श्रीमान् अचेत
११गिरफ्तार परेकै ठाँउमा फेरी पुल उद्घाटन गर्न जाँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल, के छ प्रहरीकाे तयारी
१२२ घण्टापछि नियन्त्रणमा आयो हुम्ला विमानस्थलको आगलागी, एकजना घाइते
नेपालका यी ४६ जिल्लामा फैलियो कोरोना, कहाँ कति ?
काठमाडौं । चीनको वुहानबाट विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को संक्रमण नेपालका ४६ जिल्लामा पुगेको छ । मंगलबार थप ९० जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ७२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा ९० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । २ वर्षिया बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ३५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । जसमा महोत्तरीका २ जना रहेका छन् । यस्तै जुम्ला स्थायी ठेगाना भइ बारामा कार्यरत २ जना, बाराकै ३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । रौतहटका २१, सिरहाका ५ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । एक जना जनकपुर अस्पतालमा उपचाररत धनुषाका पुरुषको पनि पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका ७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका २४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । जसमा २ वर्षिय बालिका पनि छन् । रुपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुकै ७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै अर्घाखाँचीका २, गुल्मीका २ र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका १ र अछामका १ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको हो। पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका २ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका १२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए ।
यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा ११ हजार ६६, प्रदेश नम्बर २ मा ६ हजार ५ सय ६१, बागमती प्रदेशमा २४ हजार २ सय १६ र गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार ७ सय १ जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा १६ हजार ८ सय ८०, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार ६ सय १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० हजार ९ सय २५ जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ । क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा रहेका छन् ।
देशभरीका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ५५ हजार बढी छन् । प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार ७ सय ५८, प्रदेश नम्बर २ मा १० हजार ५ सय ३५, बागमती प्रदेशमा ९ सय ६४ र गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ५ सय १३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा २३ हजार ५ सय ८९, कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार २ सय ६६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ हजार ६ सय ५७ गरी देशभरी ५५ हजार २ सय ८२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । अहिलेसम्म १ सय ५५ जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।